कालो लगुन - किन सीजन4सम्भव छ, र यो प्रिमियर हुने समय - क्र्याडल दृश्य
by फ्रेंकी 28th मई 2020 9th जनवरी 2022
4 टिप्पणिहरु ब्ल्याक लगूनमा - किन सिजन4सम्भव छ, र समय यो प्रिमियर हुनेछ
सिंहावलोकन - कालो लगुनको एक सागर4सम्भव छ?
हामीले यस विषयमा थप जानकारीको साथ अद्यावधिक लेख लेख्यौं जुन तपाईंले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ: https://cradleview.net/why-black-lagoon-is-even-more-likely-to-get-a-season-4/
अनुमानित पढ्ने समय:6मिनेट
कालो लगुन सीजन १ एपिसोड १ बाट लिइएको "कालो लगुन" (म्याडहाउस)
मेरो विचारमा, कालो लगून एक धेरै राम्रो एनिमे हो र यो पक्कै प्रशंसकहरू र आलोचकहरूको बीच मनपर्ने हो। यस कार्यक्रममा नास्तिक, क्रिष्ट र एक्शन प्याक गरीएको शोले ओवीए सम्म सबै बाटो हेरेर राख्यो। कालो लगून वास्तवमै यति स्मरणीय छ कि मैले यसलाई फेरि पनि हेर्न सकिनँ र अझै पनि कमसेकम अर्को बर्ष सम्म नराम्रो हुनेछ। म यसलाई फेरि हेर्नको लागि योजना गर्दिन किनकि मँ यो मेरो बानी हुन चाहन्न। जब म ब्ल्याक लगूनलाई पुन: हेर्दछु, म यो जस्तो देखिन्छु जस्तो मैले कहिल्यै हेरेको छैनँ, यो कति यादगार थियो!
कारण कालो लगुनको सिजन। सम्भव छ
यो एक मुख्य कारण हो जुन म चार forतुको लागि आशा गर्दैछु जुन पूर्ण रूपमा सम्भव छ। म तल व्याख्या गर्दै छु किन यो धेरै सम्भावित मौसम4हुन्छ र कहिले यो हुने छ।
म गएका अन्य एनिमको उदाहरण प्रयोग गर्नेछु अन्तराल र त्यसपछि कहिलेकाहीँ १० बर्ष पछि पनि फिर्ता आयो र अर्को स्टूडियो द्वारा अपनाए पछि पनि फर्किए।
त्यहाँ सबैभन्दा लोकप्रिय एनिम शो नभएको बेलामा, कालो लगुन पक्कै पनि अधिक सम्झनादारहरू मध्ये एक हो। यो शो मा मुख्य रूपमा तल हो, यदि तपाईं पूर्ण गहन चरित्र समीक्षा चाहनुहुन्छ भने कृपया जान्नुहोस् र ब्ल्याक लगूनका चरित्रहरूको बारेमा यहाँ अन्य जानकारीको लागि हाम्रो अन्य ब्लगमा पढ्नुहोस्।
जे भए पनि, मौसम3वा of को सम्भावनाहरूमा फर्केर तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै (केहि व्यक्तिले OVA लाई वास्तविक asतुहरू मान्दैनन्) सम्भावनाहरू धेरै बढी हुन्छन्।
यो एक प्रसिद्ध तथ्य हो कि निश्चित anime श्रृंखला जस्तै पूरा धातु दबाइ, Clannad र पनि कालो लगून लामो समयावधिको लागि अन्तरालमा जानुहोस्, कहिलेकाँही सम्म १० बर्ष सम्म। र यो यही हो जुन २००० को शुरुमा कालो लगुनको साथ भयो।
कालो लगुन सीजन २ एपिसोड "ग्रीनब्याक जेन" (मडहाउस) बाट लिइएको
जारी राखिएको छ - कालो लगुनको एक सागर4सम्भव छ?
कालो लगून धेरै आकर्षक र गतिशील ढ of्गले चित्रण गरिएको छ जुन पूरै मौसममा मेरो ध्यान समेटियो।
ग्रीनब्याक जेन चाप पनि हेर्नु रमाईलो थियो र यसले रोमानियन जुम्ल्याहा सम्बन्धमा विगतका एपिसोडमा हुने सबै कार्य र नरसंहारबाट विश्रामको रूपमा काम गर्‍यो, जुन कम्तीमा भन्नुपर्दा एकदम गहन थियो।
मैले यो भनिरहेको छैन कि कालो लगुनको प्रत्येक एपिसोड अद्भुत र Gd-like छ, तर हरेक एपिसोडमा मेरा आँखाले कहिले पनि स्क्रिन छोड्दैनथ्यो।
कालो लगूनमा दुई मुख्य सीजनहरू थिए र एउटा OVA। सीजन १ "कालो लगुन" जसमा १२ एपिसोडहरू र सीजन २ "कालो लगुन, दोस्रो ब्यारेज" फिचर गरिएको थियो। यस श्रृंखलामा पछि OVA थियो "रोबर्टाको रक्त पथ, दुर्भाग्यवश केवल ep एपिसोड मात्र प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसैले हामी यहाँ देख्न सक्छौं कि यो म regarding्गाको सम्बन्धमा एनिमेसको अर्थमा धेरै छैन।
र हामीलाई थाहा छ कि प्राय जसो एनिमेसहरू उनीहरूको सृष्टिकर्ताद्वारा लिखित म written्गाबाट लिइएको हो। त्यसोभए, तपाईं सबै सायद सोच्दै हुनुहुन्छ कि त्यहाँ एक सीजन or वा seasonतु मौसम हुनेछ, कसरी तपाईं यसलाई हेर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै। र उत्तर (मेरो विचारमा) धेरै उच्च छ।
यसको कारण यो छ कि स्रोत सामग्री (मa्गा) पहिले नै लेखिएको छ। त्यहाँ लगभग ११ खण्डहरू छन्, र मुनि म चारवटा मुख्य कारणहरू बताउन सक्छु जुन कालो लगुनको सिजन or वा 11 को लागि सम्भाव्यता धेरै छ।
Main मुख्य कारणहरू - के कालो लगुनको सिवन4सम्भव छ?
१. पहिलो, कालो लगूनको एनिमेस अनुकूलनको कुनै पनि अर्को मौसमहरूको लागि स्रोत सामग्री छ र तिनीहरूले पहिले नै लिखित हुनेछ समय द्वारा तिनीहरूले पनि एक मौसम or वा consider विचार गरेमा यदि तपाईं गणना गर्नुहुन्छ OVA एक मौसम को रूप मा। यसको हामी के भन्न खोज्दैछौं, यो हो कि त्यहाँ कुनै पनि स्टुडियोलाई रोक्न केही छैन, मात्र होईन महोदय कालो लगुनको अधिक सिजनहरू बनाउनबाट।
२. ब्ल्याक लगुन प्रशंसकहरू र आलोचकहरूलाई धेरै माया गरिन्छ, र कुनै पनि स्टुडियो र केवल माडहाउसले कालो लगुनको अर्को सीजनको उत्पादन जारी राख्न वा लिने छनौट गर्ने धेरै नै सम्भावना कम छ। सामान्यतया, यदि Madhouse anime को उत्पादन जारी छैन, अर्को स्टूडियो हुनेछ। यो केवल यसलाई आर्थिक रूपमा कती बनाउने हो, र यो लोकप्रियता हो।
Black. ब्ल्याक लगूनको सबैभन्दा भर्खरको एपिसोडको मेरो रायमा अन्तिम निर्णायक थिएन। यदि तपाईंले अन्त्य देख्नु भएको छ भने तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ कि म के भनिरहेछु, एक तरिकामा, यो एक प्रकारको चट्टान-ह्याn्गर हो। अब के हुन्छ? कथा कहाँ जान्छ? मलाई लाग्छ कि उत्पादकहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरूले अर्को सीजन पाउनेछन् र मलाई लाग्छ कि किन त्यसैले उनीहरूले यस तरीकाले यसलाई अन्त्य गर्ने छनौट गरे। यदि तपाईंले मa्गा पढ्नु भएको छ भने तपाईंले मेरो अर्थ के बुझ्नुहुनेछ।
The. OVA रोबर्टाको रगत ट्रेलबाट अन्तिम ब्ल्याक लैगुन एपिसोड २०११ मा जारी गरिएको थियो। यसले कसैलाई यो फेला पार्न सक्छ किनकि यसले एनिमेस अनुकूलन पूर्ण रूपमा बन्द हुने सम्भावनालाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ। यद्यपि तपाई यस कुरामा चिन्तित हुनुहुन्न। पूर्ण मेटल आतंक (जसमा seतुहरू थिए) ले १० बर्षको अन्तरालमा लग्यो जुन अर्को स्टुडियोले अपनाएको भन्दा अघि बढ्यो जुन मौसम4बाट छोडियो। त्यसकारण तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि मौसम or वा depending मा निर्भर गर्दै तपाईं यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ केवल सम्भव छैन, तर सम्भावना पनि छ।
यदि तपाईं नयाँ जानकारीको साथ गहिराइ दृश्यको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने नेटफ्लिक्स मूलका बारे यो लेख जाँच्न विचार गर्नुहोस् र कालो लगुनको अर्थ के हो यो नेटफ्लिक्समा:
त्यसोभए, तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, मौसमको लागि आशा बढी छ, र यी मुख्य कारणहरू हुन्। यद्यपि निश्चित गर्नका लागि पर्याप्त प्रमाण छैन।
निस्सन्देह, हामीले यो पढ्ने सबैलाई भनिरहेका छैनौं कि त्यहाँ निश्चित रूपमा सिजन4हुन गइरहेको छ। यद्यपि, हामी कहाँबाट आउँदैछौं भनेर तपाईंले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एनिमे अनुकूलन जारी राख्ने वा अर्को स्टुडियोले उत्पादनको भूमिका लिने सम्भावना धेरै उच्च छ।
हामी यसलाई हाम्रा पाठकहरू र अन्य ब्ल्याक लगून प्रशंसकहरूमा जोड दिन चाहन्छौं। यो धेरै निराशाजनक हुनेछ यदि कालो लागूनको एनिमेस अनुकूलन जारी छैन र सट्टामा रोकिन्छ।
आशा छ, यो हुने छैन र शृंखला कुनै समस्या बिना जारी रहनेछ। जे होस्, एनिमे उद्योग अप्रत्याशित छ र हामी निश्चित रूपमा थाहा पाउन सक्दैनौं कि ब्ल्याक लगूनको नयाँ सिजन चाँडै उपलब्ध हुनेछ। यदि हामीले गणना गरिएको अनुमान लगाउने हो भने, हामी भन्न सक्छौं कि नयाँ सिजन या त उत्पादन सुरु हुनेछ वा 2021 पछि कहीं पनि रिलीज हुनेछ। हामी निश्चित रूपमा 2025 मा रेखा कोर्नेछौं, तर जे पनि सम्भव छ। यदि नयाँ सिजन उत्पादन भयो भने म धेरै छक्क पर्नेछु र निराश पनि हुनेछु। यद्यपि, अहिलेको लागि, हामीले पर्खनु पर्छ र हेर्नु पर्छ।
कृपया वरिपरि रहनुहोस् र एनिमेस सम्बन्धी हाम्रो अन्य ब्लगहरू पढ्नुहोस्। हामीसँग चाँडै नै कालो लगुनबाट सूची वा शीर्ष १० वर्णहरू छन्। पढ्नका लागि धन्यबाद!
समान लेखहरू पढ्नुहोस्:
टैग: एनिमे कालो लगून कालोगुन ब्ल्याकलेग्नवेसन ब्ल्याकलेगुनवेसनसोंडेट ब्ल्याकलागुनवसेसनरेलिडेट blacklagoonseason4 blacklagoonseason4 article सिजन4ब्ल्याकलेगून
२ January जनवरी २०२१ बिहान :29: 2021 बजे
राम्रो पढ्नुहोस्। म पनि धेरै आशावादी छु कि यो आखिरमा हुनेछ। एउटा कुरा म प्रार्थना गर्दछु कि तिनीहरूले पूर्ण अ voice्ग्रेजी भ्वाइस कास्ट राख्न सक्छन् किनकि यो धेरै वर्ष भएको छ, म यसको बारेमा कुनै कुरा बदल्दिन। र म mang्गा भोल्यूम १० र ११ मा केहि भयानक क्षणहरू छन् म एनिमेमा अनुवादित हेर्न अगाडि हेर्दै छु।
११ जनवरी २०२१ साँझ :29::2021१ बजे
धन्यबाद, म पनि त्यस्तै महसुस गर्दछु, तथापि म भ्वाईस एक्टरको बारेमा चिन्तित छु जसले रेभीको भूमिका खेल्छन्, किनकि उनी करिब 30०+ वर्षको उमेरकी थिइन जब उनले पहिलो सीजन रेकर्ड गर्छिन्, अब उनी अलि ठूलो हुन सक्छिन्। उदाहरणका लागि डच जस्तो अन्य पात्रहरू ठीक नै हुनेछन् किनकि वास्तवमा उसले जापानी आवाज अभिनेता द्वारा आवाज उठाएको थियो जसलाई मैले अचम्म लाग्यो। मैले यसमा अझ गहिराइ र विस्तृत लेख लेखें जुन तपाईं यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ: यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने: https://cradleview.net/2020/12/06/why-black-lagoon-is-even-more-likely-to-get-a-season-4/
ओह सत्य हो तपाई साच्चै हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ कि यसले कसैलाई रेभी जस्तै कुनै पात्रका लागि लाइनहरु गरिरहेकोमा ठूलो तनाव दिन्छ, औंलाहरु यद्यपि पार भयो। र त्यो डचको आवाज अभिनेताको बारेमा जान्न रोचक छ, उहाँ त्यसमा विशेष रूपले बहुमुखी अभिनेता जस्तो देखिनुहुन्छ, मैले वास्तवमा अहिलेसम्म कुनै पनि कलाकारलाई देखेको थिएन।
अघिल्लो प्रविष्टि हाजिमेट कुनै गला - सीजन २ सम्भावित प्रिमियर मिति
अर्को प्रविष्टि ग्रान्ड ब्लू सीजन २ - प्रिमियर मिति